कठै ! कसो गरी बस्दै होलान सिरियामा ५ सयभन्दा बढी नेपाली चेली « नारी खबर >
कठै ! कसो गरी बस्दै होलान सिरियामा ५ सयभन्दा बढी नेपाली चेली
फाल्गुन २६, २०७४ शनिबार
उल्लिखित ३ घटनाले पुष्टि गर्छ– द्वन्द्वग्रस्त सिरियामा थुप्रै संख्यामा नेपाली युवती कामको खोजीमा पुगेका छन् । उनीहरूको संख्या कति छ, कस्तो हालतमा छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने विवरण भने कसैसँग छैन । द्वन्द्वका क्रममा हजारौं सिरियालीको मृत्यु भएको स्थितिमा त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाबारे सरकार बेखबर छ । तेजी र मायाको मृत्युको खबरपछि भने दूतावासले सम्पर्कसूत्रमार्फत सिरियामा रहेका नेपालीबारे खोजी सुरु गरिएको जनाएको छ ।
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली रहेको जानकारी आएपछि थप बुझ्ने प्रयास भइरहेको इजिप्टस्थित राजदूत झविन्द्र अर्यालले टेलिफोनमा जानकारी दिए । ‘त्यहाँ सम्पर्क व्यक्ति चयन गरी नेपालीहरूको संख्या यकिन गर्ने काम भइरहेको छ । कति छन् भन्ने सरकारलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।
सरकारले सिरिया वैध रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
‘मानव तस्करहरूले अवैध रूपमा विभिन्न बहाना मिलाएर घरेलु कामदार सिरिया पुर्‍याउने गरेका छन्,’ राजदूत अर्यालले भने, ‘यसलाई रोक्न सरकारले थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।’ सिरिया मात्र होइन, लेबनान र अन्य अफ्रिकी मुलुकमा समेत नेपाली युवतीहरू घरेलु कामदारका रूपमा पुर्‍याइएको उनले बताए । ‘घरेलु कामबाहेक अन्य क्षेत्रमा नेपाली छैनन्,’ उनले भने ।
सात वर्षदेखि चर्केको गृहयुद्धले सिरियाको जनजीवन तहसनहस छ । प्राकृतिक स्रोतको खानी रहेको उक्त मुलुकमाथि शक्तिराष्ट्रहरूको समेत चासो छ जसले द्वन्द्व झन्झन् चर्काउन सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । त्यहाँ सन् २०११ मा लोकतन्त्र समर्थकहरूले संघर्ष थालेका थिए । इजिप्ट र ट्युनिसियामा लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलनकारीले सत्तापलट गरेपछि त्यही ‘अरब स्प्रिङ’ आन्दोलन सिरिया पुगेको हो ।
सिरियाली शासक बसार अल असदलाई सत्ताच्युत गर्दै लोकतान्त्रिक सरकार बनाउन सुरु भएको आन्दोलनले गृहयुद्धको रूप लिएको छ । युद्ध रोकिएको छैन तर नेपाली त्यहाँ पुग्ने क्रम पनि रोकिएको छैन ।
मानव अधिकारका लागि राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्त जेइड राअड अल हुसेनले गुटामा दसौं हजार नागरिक गत पाँच वर्षयता चेपुवामा परेको बताएकी थिइन् । पछिल्लो समय गुटामा १ सय ७० बालबालिकासहित ७ सय ६० सर्वसाधारण मारिएका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । त्यहाँ नेपाली परे/नपरेको जानकारी पाउन सक्ने अवस्था नरहेको दूतावासका अधिकारीले बताए । कान्तिपुरबाट